Whiten Your Teeth | सेतो दाँत गाइड गर्न सर्वश्रेष्ठ बाटो
पोस्ट ट्याग "आफ्नो दाँत सेतो"
त्यहाँ Whiter मुस्कान प्राप्त गर्न एक सुरक्षित तरिका हो? छैन सबै भन्दा राम्रो सबै वा विश्वसनीय गर्न सकिन्छ. यस लेखमा हेरविचार र सजिलो संग केहि उत्कृष्ट दाँत प्रदान गर्नेछ.
Whiter गर्न पहिलो चरण, brighter दाँत राम्रो छ, व्यावसायिक सफाई. दन्त cleanings तालिका हुनुपर्छ, जहाँ प्रत्येक नियुक्ति हरेक छ महिना तालिका. तर, नियमित व्यावसायिक सफाई बेवास्ता गर्न सजिलो छ तर सामान्यतया दन्त बीमा को सबै भन्दा प्रकार द्वारा समेटिएको छ.
टिप! तपाईं आफ्नो दाँत सेतो पछि, तपाईं पिउन वा खान के को सावधान. तिनीहरूले थप सजिलै जो discoloration हुन सक्छ दाग र रंग अवशोषित हुनेछ.
लेजर whitening, छिटो परिणाम उत्पादन गर्न सक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी प्रक्रिया को छ. यो तिनीहरूले हुन सक्छ रूपमा आफ्नो दाँत आफ्नो प्रारम्भिक सेतो फिर्ता उल्टाउन भएको सबै भन्दा राम्रो तरिका हुनेछ. एक विरंजन समाधान आफ्नो दाँत मा ब्रश छ, त्यसपछि एक लेजर सक्रिय गर्न उपयोग गरिएको छ. दाँत कम्तिमा पाँच वा छ रंग द्वारा तत्काल छ.
यो आफ्नो आहार मा कच्चे फल र तरकारी समावेश गर्न महत्त्वपूर्ण छ, आफ्नो दाँत बलियो र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्न. फैटी खाद्य पदार्थ cavities को मौका वृद्धि र आफ्नो दाँत को discoloration हुन सक्छ. तिनीहरूले आफ्नो दाँत को स्वास्थ्य गर्न हानिकारक छन् किनभने खाद्य पदार्थ यी प्रकार जोगिन. तपाईं पनि एक स्वस्थ मुस्कान लागि खेलकुद जब निरन्तर हुँदैन snacking.
टिप! तपाईं सेतो दाँत खोज्दै हुनुहुन्छ भने दाँत-staining पेय पदार्थ जोगिन. पेय यी प्रकारका कोक समावेश, कफी र कालो चिया.
एक दाँत पछि दागरहित बनाइन्छन् तपाईं धेरै होसियार हुन खाने वा पिउने गर्दा आवश्यक. दागरहित बनाइन्छन् दाँत विभिन्न रंग वा दाग खाना र पेय देखि अवशोषित हुनेछ. तपाईं आफ्नो दाँत दागरहित बनाइन्छन् छन् थियो गरेपछि अँध्यारो वा staining खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थ टाढा रहन. कफी आफ्नो दाँत मा सोख र एक रंग परिवर्तन गर्नाले कुरा एउटा उदाहरण हो.
एक पराल मार्फत पिउने आफ्नो दाँत सेतो र उज्यालो रहन मदत गर्ने कोसिस. एक पराल प्रयोग गरेर यसलाई कम तपाईं उपभोग पेय पदार्थ आफ्नो दाँत दाग हुनेछ संभावना बनाउँछ. तरल आफ्नो दाँत छल्न र आफ्नो घाँटी जानेछैन.
टिप! एउटा व्यावसायिक whitening, महंगा हुन सक्छ, तर यो शायद आफ्नो दाँत दांत सुरु गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो. जबकि यो विधि थप महँगो छ, यसलाई अन्य विधिहरू भन्दा राम्रो र छिटो दांत अनुभव प्रदान गर्दछ.
सेतो दाँत गर्न स्ट्रिप्स सबैतिर सजिलै उपलब्ध छन् र पनि एकदम सस्तो हो. यी स्ट्रिप्स आफ्नो दाँत र तिनीहरूले सेतो them.Whitening स्ट्रिप्स संग व्यवहार रसायन देखि सतह दाग सफाई द्वारा काम हालै लोकप्रियता गुमाएका, किनभने उनीहरू सबै भन्दा राम्रो परिणाम प्रदान नगर्नुहोस्.
यो तपाईं आफ्नो दाँत दागरहित बनाइन्छन् प्राप्त जब कि महत्त्वपूर्ण छ, प्रत्येक भोजन पछि तपाईं आफ्नो दाँत माझ्छु पर्छ. बाँकी खाना कणहरु आफ्नो दाँत को सतह मा जीवाणु वृद्धि गर्न सक्छ. तपाईं अनुमति छैन भने तपाईंको दाँत माथि फिर्ता कठोर गर्न, जीवाणुहरु समस्या धेरै कारण हुन सक्छ, त्यसैले बनाउन तपाईं माझ निश्चित.
टिप! तपाईंले कहिले तुरुन्तै सेतो मुस्कान को खाँचो, तपाईं तुरुन्तै आफ्नो दन्त चिकित्सक भ्रमण गर्न आवश्यक. जब तपाईँले Whiter मुस्कान प्राप्त गर्न प्रयास, तपाईं हानि कारण सट्टा सकारात्मक परिवर्तन बनाउने जोखिम चलान.
तपाईं उपचार दांत कुनै पनि संवेदनशीलता ध्यान गर्नुपर्छ. यो एकदम कष्टकर हुन र छोटो समय हुन सक्छ तर गर्न सक्नुहुन्छ यो अझै पनि दुख्छ. यदि यो हुन्छ, बनाउन तपाईं दांत उत्पादन प्रयोग जारी गर्नु अघि तपाईं एक दन्त चिकित्सक हेर्न निश्चित. उहाँले आफ्नो दाँत तपाईं यस असर गर्नेछ भनेर फरक विकल्प बारे थाहा हुन सक्छ.
धूम्रपान र दाँत whitening, सँगै काम छैन. तपाईं सुन्दर सेतो दाँत चाहनुहुन्छ भने, तपाईं धूम्रपान रोक्न आवश्यक हुनेछ. जब तपाईं एक दांत उपचार पैसा खर्च र धूम्रपान राख्न, यो मुद्रा को बर्बादी छ. जब तपाईं धूम्रपान आफ्नो दाँत सेतो कि सबै काम हराउने.
टिप! सुरु दाँत whitening, अघि, आफ्नो दन्त चिकित्सक संग कुरा. के तपाईं निकट भविष्यमा गरेको प्रमुख दन्त काम गर्न आवश्यक हुनेछ भनेर थाहा छ भने, काम पूर्ण भएको छ सम्म प्रक्रिया दांत आफ्नो दाँत ढिलाइ.
तपाईं क्यान्डी वा अन्य मिठाई खान गर्दा लागि टाढा stowed एकल प्रयोग टूथब्रश राख्न. यी खाद्य पदार्थ सजिलै आफ्नो दाँत लीन हुन सक्छ, र तिनीहरूलाई हानिकारक सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं मीठो पाएका छन् पछि, आफ्नो दाँत माझ्छु एक वा दुई क्षण लिन. तपाईं राम्ररी आफ्नो दाँत स्क्रब र तिनीहरूलाई राम्ररी कुल्ला यदि टूथपेस्ट आवश्यकता छैन.
एक दाँत दांत टूथपेस्ट संग ब्रश. यी टूथपेस्ट अन्य whiteners रूपमा शक्तिशाली छैनन् तापनि, तिनीहरूले कुनै पनि हाल दाग हटाउन र नयाँ दाग आफ्नो दाँत रक्षा. यी टूथपेस्ट हल्का घर्षण तामचीनी हानिकारक बिना काम गर्नेछ भनेर सिलिका बनेको समावेश.
टिप! यो माझ महत्त्वपूर्ण छ, गम मालिश, र दुई पटक एक दिन कम्तिमा floss. तपाईं माझ भने आफ्नो दाँत धेरै Whiter रहन र तपाईं खानाको वा खाजा छ हरेक समय floss हुनेछ.
तपाईं पिउन वा पिउने पछि आफ्नो मुख कुल्ला. केही खाना वा पेय खपत पछि तिनीहरूलाई सफा गर्न समय छ भने आफ्नो दाँत Whiter रहन हुनेछ. यो दाग र cavities रोक्न मदत गर्न सक्छ.
दाँत दांत कलम प्रयोग तपाईं आफ्नो दाँत सेतो मदत गर्न सक्छ. तर, तिनीहरूलाई प्रयोग होसियार हुन महत्त्वपूर्ण, किनभने तिनीहरूले ब्लीच जस्तै काम. यो विधि सबै भन्दा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न, तपाईं हेरविचार यसलाई लागू र यसलाई overdoing जोगिन आवश्यक.
टिप! केही दांत टूथपेस्ट छैनन् सबै तिनीहरूले भन्न. तिनीहरूले आफ्नो दाँत सेतो मदत गर्न सक्छ, तर सबै भन्दा राम्रो अन्य रणनीति संयोजनमा प्रयोग गरिन्छ.
तपाईं आफ्नो दाँत हरेक वर्ष कम्तीमा पनि दुई पटक साफ प्राप्त गर्न दन्त चिकित्सक जान चाहनुहुन्छ. एक हप्ता सम्पर्क गर्न कार्यालय सोध्नुहोस् आफ्नो नियुक्ति नजिकै छ अघि.
केहि खरीद गर्नु अघि आफ्नो दाँत सेतो गर्न स्वास्थ्यप्रद तरिका बारे आफ्नो दन्त चिकित्सक कुरा. आफ्नो दन्त चिकित्सक आफ्नो परिस्थितिमा सबै भन्दा राम्रो छ के तपाईं बताउन र साइड इफेक्ट बारेमा चेतावनी सक्नुहुन्छ.
टिप! आफ्नो regimin मा flossing निर्माण. दिनहुँ Flossing पट्टिका को आफ्नो मुख छुटकारा मदत गर्छ, जो दाँत discoloration को कारणहरू मध्ये एक छ.
खानेपानी अक्सर Whiter दाँत तपाईंलाई मदत गर्नेछ. पानी Rinsing दाग appearing.Make यसलाई आफ्नो भोजन संग र भोजन समयमा पानी पिउन एक बानी रोक्न राम्रो तरिका हो.
वाइन र सोडा सेतो दाँत लागि आफ्नो खोज मा आफ्नो शत्रु हो. यी पेय दाग वा आफ्नो दाँत discolor गर्न सक्नुहुन्छ. स्वस्थ पेय तिनीहरूलाई बदल्नुहोस्. तपाईं जसरी यी पेय पदार्थ पिउन चाहनुहुन्छ भने, पक्का staining प्रभाव mitigate गर्न सकेसम्म चाँडो आफ्नो दाँत माझ्छु बनाउन.
टिप! यो ओखर रूखको छाल बिस्तारै स्क्रब गर्न दूर दाग आफ्नो दाँत मा प्रयोग गर्न सकिन्छ. नियमित रूपमा यो छाल प्रयोग सामान्यतः सुर्ती प्रयोग बाट वा पिउने केही पेय पदार्थ बाट देखेको यी दाग ​​र पहेलो discoloration हटाउन सक्नुहुन्छ.
एक fibrous स्थिरता साथ फल र शाकाहारी स्वाभाविक आफ्नो दाँत स्क्रब प्रयोग गर्न सकिन्छ. काम गर्नेछ भनेर केही खाद्य पदार्थ ब्रोकोली छन्, ककडी, गाजर, र गाजर. खाना आफ्नो मुख मा छ प्राप्त ढाकिएको थप क्षेत्रमा swish गर्न प्रयास गर्नुहोस्.
आफ्नो आहार मा थप डेयरी वस्तुहरू हाल्नुहोस. बलियो, स्वस्थ दाँत दही जस्तै खाद्य पदार्थ मा पोषक गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ, दूध र पनीर. यी खनिज पनि आफ्नो दाँत मा तामचीनी सुधार, जो खाद्य पदार्थ र अन्य कुराहरू सामान्यतया discoloration कारण छ कि आफ्नो दाँत कम susceptible बनाउँछ. यो यस्तो यी आफ्नो आहार मा रूपमा खाद्य पदार्थ सहित तपाईं Whiter छ कि एक मुस्कान छ मदत गर्नेछ भन्ने हो.
टिप! Whiter दाँत प्राप्त लागि घर उपचार एक तल पक्ष छ गर्छन–कहिलेकाहीं तिनीहरूले संवेदनशील गर्न सक्छ, रक्तस्राव विषय हो कि सुन्निएको गिजा. यदि तपाईं यी दन्त मुद्दाहरू कुनै पनि अनुभव आफ्नो दन्त चिकित्सक परामर्श गर्न नहिचकिचाउनुहोस्.
तपाईं खान पछि जीवाणु आफ्नो मुख वरिपरि बढ्नेछ. तपाईं अनुमति छैन भने तपाईंको दाँत माथि फिर्ता कठोर गर्न, जीवाणुहरु समस्या धेरै कारण हुन सक्छ, त्यसैले तिनीहरूलाई ब्रश सम्झना.
आफ्नो सेतो दाँत कायम राख्न गाढा पेय पदार्थ र फल जोगिन. केही पेय, यस्तो रेड वाइन र कफी रूपमा, आफ्नो दाँत मा दाग पार्नसक्छन्. तपाईं बस यी पेय दिन सक्दैन भने माथि, को staining प्रभाव छल्न एक पराल मार्फत सिप.
टिप! आफ्नो दाँत सेतो गर्न तपाईं बस पेरोक्साइड पेस्ट र बेकिंग सोडा तिनीहरूलाई माझ सक्नुहुन्छ. यी कुराहरू दुवै हो सामाग्री सबैभन्दा व्यावसायिक दांत टूथपेस्ट मा हो, तापनि तिनीहरूले घर मा आफ्नो भान्साको सामान राख्ने ठाउ पाउन सकिन्छ.
यी पदार्थ आफ्नो दाँत मा गहिरो दाग हुन सक्छ. तपाईं कफी वा चिया पिउन पर्छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई पिउन एक पराल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको कप खत्म पछि आफ्नो दाँत माझ्छु, वा दाँत तुरुन्त आफ्नो पेय समाप्त भएपछि. चिया र कफी पिउने, धूम्रपान साथ, मानिसहरूको दाँत discoloring गर्न प्रमुख योगदान हो.
आफ्नो दाँत सेतो एउटा प्राकृतिक उपाय प्रयोग, स्याउ साइडर सिरका जस्तै. यो व्यक्तिहरूलाई मुखमा ब्याक्टेरिया दाग हटाउन र निर्मूल गर्न देखाइएको छ. उपचार संग प्रभावकारी हुन, को सिरका संग दैनिक कुल्ला गर्नु, बिहान बेहतर छ, त्यसपछि एक दाँत लिंदा यसलाई फलो.
टिप! सही टूथब्रश चयन. तपाईं चयन गर्नुपर्छ टूथब्रश मा उनको सल्लाह प्राप्त गर्न आफ्नो दन्त चिकित्सक कुरा.
त्यहाँ प्राकृतिक दाँत whiteners तपाईं पाउन सक्षम बाहिर सट्टा तिनीहरूलाई खरीद हुन सक्छ छन्, यसरी तपाईं पैसा बचत. यो ओखर रूखको छाल दाँत सेतो गर्न प्रयोग एक उत्कृष्ट उपचार छ. एक रूख देखि छाल प्राप्त, राम्ररी यसलाई कुल्ला र यो तपाईँको दाँत रगडना. यो दाग र पट्टिका हटाउन काम गर्दछ.
तपाईं कुनै पनि whitening, समाधान मात्र प्राकृतिक दाँत सेतो भनेर थाहा हुनुपर्छ. तपाईं veneers अधिकार भने, crowns जस्तै, fillings, अगाडि अगाडि दाँत मा veneers वा दन्त काम अन्य प्रकार, तिनीहरूले नै रंग रहन हुनेछ. प्राकृतिक दाँत Whitening एकदम बाहिर छडी गरिएको गर्नुभएपछि दन्त काम हुन सक्छ.
आफ्नो दाँत सेतो रोजेर अघि आफ्नो ओथडोटिस वा दन्त चिकित्सक परामर्श. तपाईं कुनै पनि अन्य मुद्दाहरू के गर्न छ भने आफ्नो दाँत दांत सुरु नगर्नुहोस्.
एक धूम्रपान किनभने दाँत मा ती पहेंलो दाग हाजिर गर्न सजिलो छ. यो तपाईं धूम्रपान यदि सेतो मुस्कान राख्न बरु गाह्रो हुन सक्छ. तपाईं धूम्रपान गर्न छ भने, तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो दाँत को उपस्थिति को लागि कटौती फिर्ता गर्नुपर्छ.
दाग रगडना र आफ्नो दाँत Whiter बनाउन सुन्तलाको बोक्रा गरेको भित्री पक्ष प्रयोग. तपाईं पनि सुन्तला peels सुकेको मिश्रण गर्न सक्छन् र जमीन बे एक खुशबूदार toothpaste.Make तपाईं सबै अतिरिक्त फल चिनी हटाउन लिंदा सम्पन्न गर्दा आफ्नो मुख कुल्ला गर्न निश्चित गर्न छोड्छ.
रंग mouthwashes टाढा रहन तिनीहरू थपियो colors.Mouthwashes रंग थप्न रंजक समावेश समावेश रूपमा आफ्नो दाँत देखा अनावश्यक discoloration हुन सक्छ.
आफ्नो दाँत लिंदा राम्रो सुरक्षा उपाय छ. तपाईंले सधैं विशेष आफ्नो दाँत सेतो गरिएका केही टूथपेस्ट प्राप्त गर्न सक्छन्. त्यहाँ विभिन्न प्रकार को धेरै छन्, त्यसैले तिनीहरूलाई अनुसन्धान तपाईं आफ्नो दाँत लागि काम गर्दछ एक पाउन मदत गर्न सक्छ.
एक Whiter मुस्कान प्राप्त गर्न आफ्नो सास सुधार प्रयास. आफ्नो हात को सफा भाग चाट गरेर आफ्नो सास परीक्षण. तपाईं लार गंध गर्न सक्नुहुन्न भने, एक टकसाल वा केही mouthwash प्रयोग. तपाईं mouthwash जाने भने, यो रक्सी-मुक्त आफ्नो मुख सुखाने जोगिन छ सुनिश्चित.
Whitening दाँत एकदम चर्चा झिल्काहरू. यो लेख पढेपछि तपाईं थप दाँत दांत लागि प्रस्तुत विचारहरू केही लागू विश्वस्त महसुस हुनेछ कि भनेर आशा छ. सुरक्षित तपाईंको दाँत रंग सुधार गर्न यो जानकारी प्रयोग.
सेतो दाँत गाइड पोस्ट - जुन 5, 2016 12 मा:56 AM
विभाग: घर आधारित सेतो दाँत गर्न ट्याग: दाग अवशोषित, तपाईंको मुस्कान रोशन, दन्त cleanings, लेजर दांत दाँत, दाँत हेरविचार, सेतो दाँत, सेतो दाँत सुझाव, आफ्नो दाँत सेतो, Whiter मुस्कान
तपाईं सुरक्षित आफ्नो दाँत सेतो के गर्न सक्नुहुन्छ लागि एक तरिका हो? छैन सबै भन्दा राम्रो सबै वा विश्वसनीय गर्न सकिन्छ. यस लेखमा हेरविचार र सजिलो संग सुरक्षित दाँत लागि सिद्ध विधिहरू छलफल.
तपाईं आफैलाई दुई घण्टा स्ट्रिप्स देखि गम संवेदनशीलता भोगिरहेका पाउन भने, तपाईं पछि स्ट्रिप्स हटाउन प्रयास गर्नुपर्छ 30 बरु मिनेट. एक दिन को लागि दुई पटक लागू गर्न आवश्यक छ, जबकि स्ट्रिप्स 30 दुई हप्ता को एक अवधिमा मिनेट, तिनीहरूले गम संवेदनशीलता कारण रूपमा संभावना छैन.
टिप! आफ्नो दन्त चिकित्सक एक लेजर संग दांत दाँत गर्न सक्नुहुन्छ. यो तपाईंको दाँत आफ्नो प्रारम्भिक सेतो रंग फिर्ता उल्टाउन भएको गर्न तेज तरिका हुन सक्छ.
यो आफ्नो दन्त चिकित्सक भ्रमण गर्न आवश्यक छ र आफ्नो परिणाम कुनै पनि दोस्रो हो. laypeople दोकान मा प्रयोग गर्न को लागि दन्त चिकित्सक पनि खतरनाक हुन भनेर आफ्नो दाँत सेतो तरिका प्रस्ताव.
सेतो दाँत कायम राख्न, तपाईं नियमित व्यावसायिक cleanings गरेको हुनुपर्छ. हरेक महिना दन्त चिकित्सक एक यात्रा तालिका, आदर्श आफ्नो अर्को नियुक्ति बनाउन प्रत्येक सफाई लागि त्यहाँ हुँदा. तपाईं सबैभन्दा insurances यो प्रक्रिया कवर देखि यो नियुक्ति राख्न प्रयास गर्नुपर्छ.
टिप! तपाईं आफ्नो दाँत सेतो पछि खाने वा पिउने गर्दा होसियार हुनुहोस्. दागरहित बनाइन्छन् दाँत दाग थप susceptible छन्.
यसलाई आफ्नो दन्त चिकित्सक प्रस्ताव दांत आउँदा लेजर दांत दाँत सबै भन्दा राम्रो विकल्प छ. यो शायद उनि मूल एक छिटो यात्रा मा थिए छाया छ. एक विरंजन एजेन्ट दाँत लागू हुन्छ, र त्यसपछि तिनीहरूले सक्रिय एक लेजर संग गोली छन्. दाँत पाँच वा छ रंग द्वारा तत्काल छ.
तपाईं उत्पादनहरु दांत केही दाँत एउटा संवेदनशीलता विकास हुन सक्छ. यद्यपि यो एउटा अस्थायी अवस्था हुन सक्छ, यो अझै पनि चोट गर्न सक्छन्. तपाईं यो पीडा अनुभव भने, उत्पादन प्रयोग रोक्न र तपाईँले गर्न सक्छन् एक दन्त चिकित्सक हेर्न. आफ्नो दन्त चिकित्सक विभिन्न उत्पादनहरु वा पीडारहित तरिकामा आफ्नो दाँत सेतो मदत समाधान प्रस्ताव.
टिप! नियमित लिंदा आफ्नो दाँत गर्न बेकिंग सोडा थप्न. बैंकिंग सोडा प्रभावकारी र स्वाभाविक आफ्नो दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका हो.
यी उत्पादनहरु को सबै रसायन आफ्नो दाँत गर्न गाँसिसकेको थप स्थायी दाग. यो घर्षण प्रभाव औँला ब्रश हटाउँदछ पक्का आफ्नो दाँत सफा छन् बनाउँछ के छ.
स्ट्रबेरी दाग ​​दाँत लागि ठूलो प्राकृतिक उपचार हो. यो विधि काम गर्न सिद्ध गरिएको छ. यसलाई विश्वास गर या नगर, आफ्नो दाँत मा एक स्ट्रबेरी कट दल्नु तिनीहरूलाई सेतो गर्न सक्नुहुन्छ. उपचार को सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त गर्न आफ्नो दाँत मा वरिपरि पाँच मिनेट लागि जामुन बाँकी गरौं.
टिप! तपाईं कुनै पनि दाँत-whitening उत्पादनहरु प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, कुनै पनि दाह विकसित यदि तुरुन्तै रोक्न. यो संवेदनशीलता तपाईं harming छन् कि आफ्नो दाँत एउटा चिन्ह हुन सक्छ.
के तपाईं अनुपचारित cavities छ वा गम रोग बाट पीडित छन् भने साँच्चै दन्त चिकित्सक गर्न पूर्व आफ्नो दाँत दांत गर्न जानु पर्छ. आफ्नो दाँत दांत जब तपाईं अतिरिक्त हेरविचार गर्नुपर्छ. आफ्नो दन्त चिकित्सक सबैभन्दा तपाईं त्यसो गर्न लागि प्रभावकारी र सुरक्षित छ भन्ने रणनीति पाउन तपाईं बताउन सक्षम हुनेछ.
तपाईं एक पेशेवर छ द्रुत परिणाम देख रहे भने आफ्नो दाँत सेतो गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईं धेरै खराब staining छ. यो विधि अलि बढी लागत, तर राम्रो आफ्नो दाँत सेतो गर्न सक्छन् र अन्य दांत विधिहरू भन्दा छिटो हुन सक्छ.
टिप! तपाईं एक धूम्रपान छन् भने तपाईं के गर्नुपर्छ पहिलो कुरा धूम्रपान रोक्न छ. तपाईं धूम्रपान भने, आफ्नो दाँत सेतो, र त्यसपछि प्रकाश जारी, तपाईं टाढा आफ्नो पैसा निस्तब्धता छन्.
दाँत सेतो कि स्ट्रिप्स सस्तो हो र अत्यधिक सस्ती. यी स्ट्रिप्स आफ्नो दाँत मा राखिएको. Whitening स्ट्रिप्स लोकप्रियता छोटो वृद्धि आनन्द उठाए, कारण सिद्ध भन्दा कम परिणाममा.
तपाईं staining हुन सक्छ जो पेय पदार्थ पिउन छ भने, पानी तिनीहरूलाई फलो. यो दाग रही आफ्नो दाँत रोक्न सक्छ. अर्को विकल्प एक पराल मार्फत यी पिउन छ, वा आफ्नो कफी संग गैर-झिकिएको दुध प्रयोग.
टिप! आफ्नो दाँत दांत पछि, हँसिलो राख्न सम्झाउने Vaseline लागू. जबकि यो tastiest विकल्प हुन सक्छ, को petrolatum जेली एक सुरक्षा गठन हुनेछ, staining रोक्न हुनेछ अस्थायी कोटिंग.
तखतालाई mouthwash बन्द जोगिन, विशेष गरी त्यहाँ रंग थपिएको छ भने. Mouthwash वास्तवमा आफ्नो दाँत थप discolored बन्न सक्छ. साथै, तिनीहरूलाई धेरै आफ्नो जिब्रो र गिजा संवेदनशील बनाउन सक्छ कि एक घटक रूपमा रक्सी छ, साथै आफ्नो रगत मा रही रूपमा.
टिप! तपाईं आफ्नो सास बारेमा थप विश्वस्त छन् भने तपाईंले आफ्नो मुस्कान बारेमा थप विश्वस्त हुन छौँ. तपाईं खराब सास छ भने आफ्नो सफा हात पछाडि Lick निर्धारण.
जैविक नरिवल तेल तपाईंको दाँत लागि एक दांत एजेन्ट हो. लागि बस 10 एक दिन मिनेट, कम्तिमा लागि नरिवल तेल rinsing प्रयास 10 हरेक दिन मिनेट. पछि लगभग 10 मिनेट, तपाईं सामान्यतया हुनेछ रूपमा आफ्नो मुख बाहिर र ब्रश कुल्ला. तपाईं संभावना केही दिन पछि परिणाम देख्नु हुनेछ.
विधि दांत आफ्नो दाँत लागि के रहेको छ थाहा. के तपाईं प्रयोग उत्पादनहरूको बारेमा अव्यावहारिक आदर्श छ भने, तपाईं आफ्नो दाँत को सफेदी संग निराश अप हावा सक्छ. शामिल कारक विचार, आफ्नो उमेर जस्तै, र आफ्नो दाँत मा दाग र discolorations को हदसम्म. आशा के आफ्नो दन्त चिकित्सक सोध्न.
टिप! ताजा साग वा cilantro चिविङ तपाईं आफ्नो मुस्कान रोशन मदत गर्न सक्छ. यी प्राकृतिक जडीबुटी दाग-पैदा ब्याक्टेरिया neutralizing सहायता गर्न सक्ने गुण समावेश.
खाने पछि आफ्नो दाँत लिंदा तिनीहरूलाई उज्यालो र चमकदार रहँदा एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो. तपाईं कफी पिउने हुँदा यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ.
गाढा खाना कणहरु समय दाग आफ्नो मुख हुन सक्छ. भोजन पछि चीनी मुक्त गम चबाने यी दाग ​​जोगिन. यो कुनै पनि खाद्य कण dislodge र तिनीहरूलाई आफ्नो दाँत staining देखि राख्नेछ.
टिप! आफ्नो दैनिक तालिका नियमित flossing समावेश. यो तपाईंको दाँत discolor गर्न सक्ने आफ्नो पट्टिका छुटकारा मदद गर्न सक्नुहुन्न.
स्ट्रबेरी स्वाभाविक आफ्नो दाँत Whiter देखा रोशन गर्न सजिलो तरिका हो. स्ट्रबेरी आफ्नो दांत दाँत उपाय मा धेरै सकारात्मक प्रभाव रूपमा परिणाम प्रकट गरेका छन् सक्नुहुन्छ. यो स्ट्रबेरी भन्दा राम्रो परिणाम लागि कम्तिमा पाँच मिनेट आफ्नो दाँत मा रहन दिन.
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने आफ्नो दाँत Whiter हुन, सुन्ताला वा अन्य सिट्रस फल उपभोग छैन. साथै आफ्नो रस पिउने छैन प्रयास. यी खाद्य पदार्थ मा एसिड आफ्नो दाँत मा दूर खाने हुनेछ. साथै, ओछ्यानमा अघि खपत यदि यो फल र रस यस प्रकारको एसिड भाटा लागि मौका बढ्ने सिद्ध गरिएको छ, जो बारी मा पनि आफ्नो मुस्कान असर गर्छ. त्यसैले, विशेष गरी राति यी खानेकुरा र रस जोगिन प्रयास.
टिप! आफ्नो आहार मा थप डेयरी उत्पादन समावेश. बलियो, स्वस्थ दाँत दही जस्तै खाद्य पदार्थ मा पोषक गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ, दूध र पनीर.
तपाईं पेरोक्साइड र बेकिंग सोडा संग घर मा एक दांत concoction हुन सक्छ. अप गर्न दस मिनेट आफ्नो दाँत माझ्छु यो मिश्रण प्रयोग गर्नुहोस् बितिसकेको छ. तपाईं कसरी कठिन माझ सावधान रहनुहोस्, रूपमा गम दाह सक्छ.
Whiter दाँत लागि एक सरल विधि कागति को रस संग तालिका नुन मिश्रण छ. कुनै पनि सील कन्टेनर मा मिश्रण राख्न, त्यसैले तपाईं अक्सर प्रयोग र यसलाई शायद बिगार्छ हुनेछ गर्न सक्ने.
टिप! एक पराल मार्फत पिउने दाँत दाग रोक्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ. एक पराल मार्फत पिउने द्वारा, तपाईं आफ्नो दाँत तरल उजागर गर्दै छन् कि समय कम.
तपाईं खान पछि जीवाणु आफ्नो मुख वरिपरि बढ्नेछ. यदि तपाईंको दाँत सफा छैन, जीवाणुहरु समस्या धेरै कारण हुन सक्छ, त्यसैले तिनीहरूलाई ब्रश सम्झना.
यो सुकेको बे पात र सुकेको सुन्तला peels लिन र एक पाउडर मा उनलाई पीसने. यो पाउडर गर्न धाराको पानी को एक छप थप्न, र यो तत्काल प्राकृतिक दाँत दांत टूथपेस्ट गर्नेछ. यो पनि पाइएको छ आफ्नो दाँत सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरू रोक्न.
टिप! फल ठूलो रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक, दाँत सेतो सुरक्षित तरिका. स्ट्रबेरी विशेष तरिकाले काम यस उद्देश्यका लागि.
यदि ट्रे राम्रो आफ्नो दाँत फिट छैन, को दांत जेल बाट रसायन बाहिर seep सक्नुहुन्छ गम दाह परिणामस्वरूप.
केही प्राकृतिक उपचार सेतो दाँत मदत गर्नेछ, यस्तो स्याउ साइडर सिरका रूपमा. यो आफ्नो दाँत सफा र आफ्नो मुखमा ब्याक्टेरिया हटाउँदै गर्दा दाग हटाउन जानिन्छ. तपाईं आफ्नो दाँत माझ्छु अघि एक दिन एक पटक बारेमा सिरका gargling प्रयास.
तपाईंको मुस्कान brighter दिखेगा. -आधारित नीलो देखिन्छ कि लिपस्टिक संग ओठ रंग प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस् वा होंठ प्रयोग. नीलो-tined Reds वा जामुन छन् कि रंग आफ्नो दाँत Whiter देखा मदत. मैट ओठ उत्पादनहरु टाढा रहन तिनीहरूले आफ्नो दाँत हुन सक्छ रूपमा.
दाँत दाग कि पेय पदार्थ आफ्नो दाँत राख्न सक्छ खपत पछि पानी पिउने. एक पानी कुल्ला setting.You देखि पेय कारण पनि पराल मार्फत पिउन सक्नुहुन्छ दाग रोक्छ.
तपाईं माझ भनेर केही बनाउन, floss, र कम्तिमा दुई पटक एक दिन एक गम मालिश प्रयोग. आफ्नो दाँत सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा अधिकतम तरिका माझ र तपाईं खान हरेक समय floss वा केहि पिउन छ. तपाईं पक्का हुन सक्छौं यसरी खाना मलबे र पट्टिका आफ्नो दाँत staining अन्त सक्ने उन्मुक्ति पाउनु.
स्ट्रबेरी पेस्ट तपाईं सेतो दाँत मदत गर्न सक्छ. एक पेस्ट मा ताजा स्ट्रबेरी Mash, त्यसपछि मिश्रण आफ्नो दाँत लागू. यो स्ट्रबेरी विगतमा आफ्नो दाँत कठोर रसायन लागि आवश्यकता बिना Whiter हुन कारण हुनेछ. यो घर दांत विधि तिमी माथि-दांत जोगिन मदत र तपाईं एक स्वाभाविक सेतो मुस्कान दिन सक्छ.
Mouthwash आफ्नो दाँत केही कारण हुन सक्छ. तपाईं mouthwash प्रयोग को प्रभाव सामना गर्न सक्छन् भनेर दाँत छ वा छैन आफ्नो दन्त चिकित्सक सोध्न.
अहिले तपाईंलाई थाहा दांत दाँत को विषयमा राय धेरै छन्. तपाईं आफ्नो दाँत हानिकारक बिना अब कि मोती सफेद मुस्कान प्राप्त गर्ने बारे केही विचार गर्नुपर्छ. तपाईंको मुस्कान brighter बनाउने बारेमा जाने यस लेखमा सल्लाह लागू र सुरक्षित.
सेतो दाँत गाइड पोस्ट - जुन 5, 2016 12 मा:51 AM
विभाग: सेतो दाँत सुझाव ट्याग: उज्ज्वल सेतो मुस्कान, एक उज्ज्वल सेतो मुस्कान प्राप्त, दाँत कसरी सेतो गर्न, मेरो दाँत सेतो, सेतो दाँत, आफ्नो दाँत सेतो, पहेंलो हाँसो